Archive du 20180813
Fifidianana Filoha Vonon-kandresy Ravalomanana
Tsotra ary zavatra 5 no hafatra hampitaina amin'ny mpitolona, ny TIM sy ireo rehetra mpanohana an'i Marc Ravalomanana, raha ny nambaran’ny depioten’ny fanovana Hanitra Razafimanantsoa nandritra ny fanatrehana ny lanonana nokarakarain’ny tanora TIM Avaradrano teny Anosiavaratra ny andron’ny sabotsy 11 aogositra lasa teo.
Andry Rajoelina Mikononkonon-javatra hafahafa…
Mampanahy tanteraka ny fihetsik’i Andry Rajoelina amin’izao fotoana satria tsy tan-dalàna intsony amin’ny propagandy mialoha ny fotoana, ka mampanantena abobo samihafa, toy ny tao Antsirabe ny sabotsy teo.
Repoblika fahefatra Nanary fahafahana
Raha tsiahivina dia “Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana” no tarigetran’ny firenena Malagasy tao anaty repoblika fahatelo.
Fifidianana mangarahara Mila mpanohitra, hoy ny Tamami
Dieny tsy tara, hoy ny filohan’ny antoko Tanora Malagasy miray na Tamami, Samihary Floriot, dia mbola manao antso avo amin’ny filoham-pirenena ihany izahay hoe raha hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ianao ary hametra-pialana atsy ho atsy dia tsiahivo fa misy adidy mbola tsy vitanao.
Fiatrehana fifidianana Miara-miasa ny CENI sy ny mpanao gazety
I Antsirabe indray no nampiantrano ny fiofanana nokarakarain`ny CENI Madagascar ho an’ireo mpanao gazety momba ny fiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ny 7 novambra 2018 izao
Propagandin’ireo kandida Tsy voara-maso ireo vola maloto
Tany tan-dalàna e ! Firenena tsara tantana e ! Fitantanana magarahare e ! Ireo no fehezan-teny atao ambetin-dresaka eto amintsika,
Saraha Rabeharisoa “Zava-dehibe ny fahaleovantena ara-toekarena”
Ahoana ny fampiakarana ny farim-piainan`ny Malagasy? Tsy maintsy ny toekarena no hampiakarana azy, hoy ny kandidàn`ny PLD, Saraha Rabeharisoa satria ny mpitondra Malagasy dia mbola miankin-doha amin`ny vahiny amin`ny tetibola hananany na ny vola ampiasiany.
Zafilahy Stanislas « Kandida efa vonona tanteraka i Dada »
Efa vonona tanteraka ny Filoha Marc Ravalomanana amin’ny fiatrehana ny fifidianana. Io no fanambarana nataon’i Zafilahy Stanislas tetsy amin’ny Magro Behoririka tamin’ny hetsika ny sabotsy 11 Aogositra farany teo manoloana ireo mpitolona tonga teny an-toerana. Misy fotoana ny zavatra rehetra ary efa vonona izy amin’ny angady sy ny harona hoy hatrany izy nandritra ny kabary nataony.
Pastera Mailhol sy ny Apokalipsy “Ny harena an-kibon’ny tany no hampandrosoana ny firenena”
Tsy ny fiompiana sy ny fambolena intsony izay miantoka ny 85 %-n’ny fiainan’ny Malagasy no ho enti-mampandroso ny firenena atsy ho atsy hoy Pastera Mailhol fa haompana indray amin’ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany. Io ihany mantsy hoy izy no
Gasy tia vao Kolontsaina no nisy resy tosika, hoy ny mpandinika
Na iza na iza firenena naniry hanjanaka teto Madagasikara, hoy ny mpandinika, Toky Rakotobe, dia ny lafiny kolontsaina foana no nezahan’izy ireo nodomina teto.
Depiote Rasendramiadana Manetsika ireo TIM Boriborintany fahadimy
Nihaona sy nitafa tamin’ny tamin'ny mpandrindra, DISTIM sy FokoTIM tao amin'ny boriboritany fahadimy ny depiote Rasendramiadana Clarisse ny andron’ny sabotsy 11 aogositra 2018 teo.
Propagandy mialohan’ny fotoana Fanompana ireo manara-dalàna
Misy fitondram-panjakana ara-dalana eto kanefa misy olona manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana, ary milaza ny programany.
Poule des As « Thb Champions League 2018 » Mitarika vonjimaika ny Fosa Juniors
Mitarika an’isa vonjimaika eo amin’ny filaharana ankapobeny amin’ny fifaninanana “Poule des As Thb Champions League Malagasy 2018” ny
Rugby Amboaran’ny Ben’ny tanànan’Iarivo Tsy tonga niatrika ny lalao ny FTM Manjakaray
Nanomboka omaly alahady 12 aogositra 2018 tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny lalao rugby à XV fiadiana ny Amboaran’ny Ben’ny tanànan’Iarivo andiany voalohany.
Klioba Lion Force Kick Boxing Miditra amin’ny faha-8 taonany amin’ity 2018 ity
Miditra eo amin’ny faha-8 taona niorenan’ny ny kliobana Kick Boxing Lion Force.
Samy miroso tsikelikely amin’ny fanaterana ny antontan-taratasy maha kandida azy daholo aloha hatreto izay te ho filoham-pirenena rehetra.
ESC ESPIC Manohana ireo tanora hampandroso ny firenena
Niampy 50 mianadahy indray ireo tanora teknisiana eto amintsika, mpianatry navoakan’ny sekoly ambony ESC ESPIC.
Fanadinana CEPE hatao rahampitso Misy laza adina efa niparitaka ?
Mifamahofaho tanteraka ny resaka laza adina momba ny fanadinana CEPE tanterahina rahampitso 14 aogositra 2018. Nanaitra ny zava-nisy tany Sambava, noho ny ambara fa fipariahan’ny laza adina “Opération” na Asa marika izay voalaza fa niparitaka nanomboka ny sabotsy tolakandro.
Mandoto Taksibrosy nitondra sembana notafihin’ny dahalo
Mirongatra hatrany ny fanafihan-jiolahy eto amintsika. Lohalaharana amin’izany ny lalam-pirenena fahafito izay nitrangana fanafihana indray ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 01 ora maraina.
KANDIDA MIANDRY KELY ALOHA
Maromaro ny kandidà ny hanapa-kevitry ny tsy mbola hametraka ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiana raha tsy amin’ny faramparan’ny fetr’andro hahafahana manatontosa izany.
Ho antsika eto Antananarivo dia mitohy hatrany ny tolona ka maka aina tsara isika anio alatsinainy fa rahampitso talata 14 Aogositra 2018 amin ny 9ora tsy diso eny amin’ny INFP Mahamasina ny fotoana, hoy ireo mpampianatra mbola manohy ny tolona amin’izao fotoana izao.
HAFARI Malagasy sy ny FMOS Namoaka mpianatra 300 mianadahy
Namoakatra mpianatra mahay sy mahafolaka ny teny Anglisy 300 mianadahy indray ny FMOS miahy ireo ankizy sahirana etsy Anosizato sy ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Banky foiben’i Madagasikara Manao pi-maso amin’ny mpamatsy vola
Nisy ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny “conseil de ministre” farany teo ka nivoizana ny resaka “recapitalisation” an’ny banky foiben’i Madagasikara. Rehefa miresaka banky foibe anefa dia ny fanjakana avy hatrany no ao an-tsaina ka raha izany no misy dia ny maha-fanjakana mihitsy no mampametram-panontaniana hoe mbola afaka atao ve ny mifampiraharaha aminy (crédibilité).
Indostria manodim-bokatra Mbola maro ireo sakana eto Madagasikara
Raha te hiroso tanteraka amin’ny fampiroboroboana ny Indostria Madagasikara dia tsy maintsy manana vahaolona maharitra ny amin’ny sehatra angovo.